Budata mmemme a nke anyị wuru iji dozie mmemme anyị? | Martech Zone
Ndị ahịa anyị na-eji PCAnywhere ebe okwu maka nkwado ha. M na-agba ọsọ Vista - yabụ mgbe m nwara ịbugo onye ahịa anyị nwere ikikere, ezutere m ozi ngwa ngwa na onye nrụnye ahụ kwụsịrị.
Na ịga na saịtị Symantec, ha mere idozi nsogbu ndakọrịta na ihe upgrade na mbipute 12.1. Agwọ ahụ? Ga-akwụ $ 100 maka nkwalite ahụ. Ekwesịrị m inwe ya, yabụ akwụrụ $ 100 ahụ. Kwụ ụgwọ $ 100 maka ngwa iji rụọ ọrụ mgbe ị kwụrụ ụgwọ izizi nke mbụ zuru oke iji mee ka iwe gị.
Ugbu a enwere m 12.1 gbagoro, enwere m ọtụtụ nsogbu na ya. Ngwa ahụ na-egosi na ọ na-agba ọsọ ma ọ bụrụ na m lelee Task Manager, mana windo enweghị ebe achọtara. Ma oburu na m nweta windo elu, o juchapu. Amalitere m nyocha okwu a na nzukọ nzukọ Symantec. Otu ihe edeturu m hụrụ bụ ezigbo edemede na Symantec Nchekwa onwe omume.
Kedu ụdị ụlọ ọrụ ngwanrọ na-ede ihe omume nke na-edozi nsogbu metụtara usoro mmemme mbụ ha? Echere m na Symantec ga-abụ ụlọ ọrụ ahụ.
Hey Symantec: Ọ bụrụ na ị maara ihe nsogbu ahụ bụ na otu esi edozi ya, tinye ndozi na nke gị mbụ ngwa !!!
Mgbe ị wụnye usoro Autofix, PCAnibe ka na-enwe nsogbu. M maa jijiji mgbe m ga-eji mmemme Symantec ọ bụla… M na-ede banyere ha ogologo oge.
Tags: kaadịiphone ngwa mgbakwunyeisiokwu iphonendị na-achị achịụlọ ọrụ ekwentịn'èzí mgbasa oziwordpress ha
Mee 10, 2008 na 8: 59 AM
Windows Vista… mmalite nke njedebe maka Microsoft?
Ọ bụrụ na ị na-enweta nke a mgbe niile, gbalịa ihe ndị a:
– Mwepụta sessioncontroller.exe – ị ga-ahụ nke a na mmemme wụnye ndekọ.
– chere sekọnd ole na ole
- wee pịa ugboro abụọ wee malite pcAnywhere (winaw32.exe)
Ihuenyo oghere ahụ bụ n'ihi pcanywhere na-echere oge nhazi.exe ka ọ malite.
Edoziri nke a na 12.5 - ugbu a na Beta na http://betanew.altiris.com/BetaProducts/PCAnywhere125Enterprise/tabid/148/Default.aspx
Ọkt 22, 2008 na 5:05 PM
Ọ dị mma, ọ dị mma… ma e wezụga na mmelite .5 ọ bụla (yana ụfọdụ mmelite .1) bụ ahịrị ngwaahịa dị iche, na-achọ mgbakwunye ọzọ. Maka $200 (ọbụlagodi na nkwụghachi ụgwọ $100 “mmelite”), ana m atụ anya na ngwaahịa ngwanrọ m ga-arụ ọrụ, n'ime igbe, na-enweghị nsogbu. Ngwa ngwa. Ọ bụghị mgbe ichere 6 ọnwa, ma ọ bụ ọbụna mgbe na-eche 30mb nke mmelite si ha LiveUpdate usoro… nke, na-akpali ezuru, nanị na-ahụ akụkụ nke ha arụnyere software. Kedu ihe kpatara na ọ naghị emelite * niile * nke sọftụwia Symantec m n'otu oge, kama ịchọ 7 ụdị LiveUpdate dị iche iche maka ngwaahịa 7 dị iche iche sitere na otu ụlọ ọrụ?
Back to my first gripe… kedu ihe kpatara m ga-eji kwụọ ụgwọ ọzọ iji nweta ihe kwesịrị, ma ọ dịkarịa ala, abụwo ihe nkedo ewepụtara nye ndị ọrụ 12.1, echefula 12.0 (nke anaghị arụ ọrụ na Vista)?